Booliska oo loo ogolaaday in ay gacanta kusii hayaan ninkii dhinaca xanaanada u qaabilsanaa hotelki lagu weeraray Mandera – The Voice of Northeastern Kenya
Booliska oo loo ogolaaday in ay gacanta kusii hayaan ninkii dhinaca xanaanada u qaabilsanaa hotelki lagu weeraray Mandera
Maxkamad uu fadhigeedu yahay magaalada Mandera ayaa saaka ogolaatay in ciidamada la dagaalanka argagaixsada ee booliska ay muddo 10 cisho ah gacanta ku sii hayaan nin qeybta xanaanada macaamiisha u qaabilsanaa hotelka Bishaaro ee dhawaan la weeraray.
Hoteelkaasi oo ay dabley lagu tuhunsanyahay al shabab qaraxyo rasaas ku weerareen habeenimadii ay talaadada soo galeysay ayaa lagu dilay 12 ruux oo dhamaantood ahaa kuwo aan kasoo jeedin deegaankaasi oo ka tagay qeybaha kale ee Kenya, halka 4 kalena ay ku dhaawacmeen.
Askari ka tirsan booliska oo lagu magacaabo Stephen Opondo, ayaa maanta garsoorka maxkamadda u sheegay in eedeysane Abdirahman Ali oo 21 sano jir ah lagu tuhunsanyahay in uu gacan siiyay kooxdii hubeysneyd ee weerarka fulisay.
War bixinta maxkamadda loo gudbiyay ayaa sidoo kale lagu xusay in Mr Ali uu horay ugu lug lahaa fal dambiyeedyo ka dhacay gudaha magaalada Mandera.
Ninkaasi dhalinyarada ah ayey ciidamada amaanka eek u sugan Mandera xabsiga u taxaabeen maalintii talaadada ahayd ee ay taariikhda ku beegneyd 25-ki bishaan October.
Duncun Mtai oo ah Xaakinka maxkamadda ee kiiskaan dhageysanayay ayaa ogolaaday codsiga booliska ay ku dalbadeen in ay muddo 10 maalmood ah kusoo dhameystiraan baaritaanka, si mar kale loo dhageysto dacwaddaasi.
← Dadka ku jira xeryaha qaxootiga dhadhaab oo muujinaya walaac xoog leh
William Ruto oo la filayo in uu booqdo harada ay dagaallada ka socdaan ee Kerio →